Ụlọ nnọchite anya: Ihe mere na Plateau bụ mkpochapụ agbụrụ - BBC News Ìgbò
Ụlọ nnọchite anya: Ihe mere na Plateau bụ mkpochapụ agbụrụ
Image copyright @HouseNGR/ Twitter
Ndị ụlọomeiwu nta mere ọtụtụ mkpebi ụnyaahụ dịka ha si ezumike lọta nke gụnyere ịkpọ mkpamkpa kpara na Platu steeti mkpochapụ agbụrụ nke Bekee na-akpọ 'Genocide".
Na mkpebi ha, ha gwakwara gọọmenti etiti ka ha rue ụlọ ebe 'ụmụ enwe nne enwe nna' ga-anọ na mpaghara ebe mmemina a mere nke merela ọtụtụ ụmụaka 'enwe nne enwe nna'.
Ụlọomeiwu nta ahụ ji okwu gbasiriike katọọ ogbugbu ahụ mere na Platu ma gwa gọọmenti etiti ka ha mee ihe pụtara ihe iji kwụsị ụdị mmenina ahụ.
Media captionPlateau: Anya m hụrụ ihe dị egwu
Ndị onyonyo na-eme ngosi iwe n'Instagram maka ogbugbu Plateau
Plateau: Lee ndị nwụrụ kemgbe ọgbaghara 2018 bidoro
Ogbugbu Plateau: Ihe Soyinka na ndị ọzọ na-ekwu ugbua
Ikpọ ogbugbu ahụ mkpochapụ agburu bụ iji nweta ihu ndị otu mbaụwa bụ ''United Nation'' ka ha tinye uchu na nchekwa Naịjirịa nke na-ada kwa ụbọchị.
Mkpebi ndị a so na mkpu nke otu onye nnọchiteanya si Platu steeti bụ Istifanus Gyang tiri maka ọnwụ mmadụ 215 na steeti ahụ.
Ha kpebikwara ka gọọmenti etiti weghachite obodo 52 nke ndị bịara abịa nara ndị nọ n'okpuru ọchịchị Barkin Ladin, Rịyọm, Bakos, Basa na Mangi n'ike, ma kwuo ka a kpọghachite ndị nwe obodo ndị ahụ a chụpụrụ n'ike.
O kwuru na ọ bụrụ na e weghachiteghi ala ndị, ọ dịka ịhapụrụ oye ohi ihe o zutere n'ohi.
Ụlọomeiwu ahụ kpọkwara ka a nwụchie ndị niile aka ha dị na ya bụ arụ ka ha zara ọnụ ha ebe ha kwuru mkpa ọ dị na e kpokobara ndị nyocha ka ha leba anya ma nyocha ngwọagha niile ndị ọchịehi jiri mee mwakpo ahụ ma mata ebe ha si na ụdị ngwọagha ọ bụ.
Ha gwara onyeisiala ka o mekarịa naanị iji ọnụ katọọ ogbugbu ma mee ihe a na-ahụ anya ịkwụsị ya ebe hakwuru ka ndị omeiwu tinye anya n'ịgbanwe iwu Naịjirịa ozugbo ka e nwee ndị uweojii nke steeti ka e nwee ike weghachite udo na nchekwa na steeti ebe ọ bụ na ndị nke gọọmenti etiti anaghị arụ ọrụ ha nkeọma.